Asian Description Khabarova "Portrait of mi", zvakanyorwa muna 1974
Arts uye Entertainment, Unyanzvi
Zvinoshamisa uye chinoumbwa nezvinhu zvakawanda upenyu Russian Artist Valery Iosifovich Khabarova.
Life uye Works of V. I. Habarova
Full wenyaya mufananidzo - "Portrait of Girl ari cheya", zvakanyorwa muna 1974 by the artist Khabarov Valeriy Iosifovich. Munyori anozivikanwa kwete chete kuRussia, asiwo France, Italy, Germany, USA. Akazvarwa Artist muna 1944, 4 August, mutaundi Michurinsk, Tambov Region. Hondo kunyimwa baba vomukomana, saka akarerwa naamai vake Zinaidoy Dmitrievnoy. Valery kwaniso dzekugadzira akatanga kuratidza mangwanani, mudzidzisi wake wokutanga akanga Platitsin AV On kurumbidza kwacho ari mudzidzisi akatora mukomana ari Ryazan Art School muna 1958. Uye muna 1967 Habarov V. I. akapinda Moscow Art Institute Surikov. Kudzidziswa ake akaramba ari rokusika wekishopu kuti 1977. Mugore iroro akaroora Gurjanova I. chikuru Genre Its uchiri mufananidzo. Pose zvaakasika, iye unoisa anokosha. Inonyanya kufarirwa mabasa the artist, "Portrait VI Kushilovoy uye SA Gonozovoy akanyorwa muna 1989; "Portrait of a Boy," "Asi upenyu ne pussy the willow", "Portrait of K. Shatov," rakanyorwa muna 1977. Basa "Portrait of a Girl ari cheya" rinotaura zvakawanda mufananidzo rondedzero-tsananguro. Khabarov "Portrait of mi" akati apotheosis basa rake. Akanyora V. I. Habarov uyewo mifananidzo kuti Eriya Church muguta Michurinsk. Chaizvo expressiveness, zvakasiyana kudzika Mhandara uye mwana mumaoko. Most mabasa ake wakachengetwa mune miziyamu kuchamuka A. M. Gerasimova.
asian Description Khabarova "Portrait of mi"
It izere zvahunoreva uye asian Mila Holdevich. Zvinofanira kuongorora zvakadzama rondedzero mufananidzo. Khabarov "Portrait of mi" anoona chimwe angled. Unoratidza musikana makore 12, pamwe mubereko ndakaverenga bhuku. Depth nechekumberi dzinonyatsotiratidza kunosimbiswa mutambo zvenzwi - chiedza nerima, inopenya uye muted, inodziya uye kuchitonhora. Blue cheya pamusoro yaitwa inodziya mavara masvingo uye uriri, chiedza zvipfeko vasikana - zvose zviri nenzira imwe chete sezvamunoita uye blends Nyatsobatanidzwai kupinda zvinonyatsorehwa pfungwa. Game kusiyanisa anosika pfungwa pakuzara uye kukwana mufananidzo. Zvinoshamisa kuti nechekumberi haisi vaipikisa necheseri. Zvizhinji anoti Khabarov, "Portrait of Mila." Rondedzero-tsananguro emifananidzo ake anoratidza musimboti uye zvinoreva basa rake. The kupenda ane kujairika rinobva ehupfumi. Zvose yake kunyorova rinokosha zvekupfakira noushamwari uye nokunyaradza. Kutarira painting, sokunge unonzwa sezvo kupisa anopararira kuburikidza muviri mushure refu muchando kufamba, kana uchifamba kuva unodziya kamuri. Description asian Khabarova "Portrait of mi" achirega ona kuti Genre ari firimu akabatanidzwa kwazvo pamwe mufananidzo mufananidzo musikana.
Asi kwete chete kuti munyori aida kuratidza basa rake. vemifananidzo zhinji kupenda mifananidzo inozivikanwa vanhu nguva. Asi nyaya iri kazhinji yakavigwa monotone uye vanongogara nzira vanhuwo zvavo. Miitiro, tsika, tsika kupinda zvakadzama nzira yavo youpenyu. Zvinofungidzirwa kuti mufananidzo - kubatana pakati kare uye chipo. Ndicho girazi nhoroondo. Tarisa mufananidzo - akafanana kuverenga bhuku. In chitarisiko tsananguro pamufananidzo, unogona kudzidza zvakawanda pamusoro nyika kuratidzwa gamba. Hapana tsaona yazvino chikoro zvidzidzo rinosanganisira rondedzero pamufananidzo. Khabarov "Portrait of mi" anonyora zvinonzwisisika kuti mitauro yemazuva ano.
Zvinodiwa Kuti mufananidzo
Munhu anodhirowa mifananidzo wechokwadi nguva dzose hanya kwete chete pamusoro fanano, iye anoedza kuratidza manzwiro, pfungwa uye hunhu. Pamberi nokuvatema bhurasho munyori wokutanga muchakumbira: "Ndiani murume uyu pamberi pangu? Chii? Strict iye kana zvakanaka? Anoda? The gamba akabatikana? zviroto chii? ". In Genre ichi, sezvo ari mufananidzo, zvinokosha kufunga pamusoro zvose, akakunda ose chiso features, zvose chiso chadzo kuudza yakawanda sezvingabvira nezvomunhu uye nezvenhoroondo. asian iwe akaberekwa nguva uye akanga nechitendero, asi vakamira kunze somunhu yoga Genre muna Renaissance. Asi nguva dzose huru chinodiwa raiva mufananidzo fanano uye Kuziviswa musimboti murume.
Chii inoti "Portrait of mi"
Achishandisa pendi uye kanivhasi womufananidzo anokwanisa andobata meso dzinopenya, ndinotsveruka kana pallor. Vanogona kushandiswa vafunga pamusoro kufara mufananidzo uye munhu ari kubatsira nyika yake yomukati. tenzi ruzivo kuwedzera mufananidzo pamusoro kanivhasi, nguva dzose ndoratidza fungidziro nokuda Fafitera. Uye "Portrait of Mila 'mufananidzo kunogona zvakawanda zvokufunga nezvazvo. Description Khabarova asian "Portrait of mi" kunoita kuti uone pfungwa pachiso musikana wacho kuti inotaura nekuchiva guru kuverenga. Zvinogona vaifunga kuti mwana anofarira mufananidzo Skating uye chete vachangopinda kana nokudzidziswa kana kubva Rink, apo uchinakidzwa neshamwari. skates zvachero nhema nezvazvo akakurumidza nako musikana akagara bhuku. Inobaya mwoyo nyaya kuverenga mumaziso musikana. Zvichida ichi ndicho chiitiko yokufungidzira kana nhoroondo yebhuku dzezvakaitwa Knights.
Rabva pfungwa V. I. Habarova
Kana ukanyatsoongorora funga rondedzero Khabarova Portrait "Portrait of mi", unogona kuona chaiyo kudzika uye kukosha mufananidzo kuti munyori. On-musikana indoor zvipfeko - T-hembe uye majini. bvudzi rake blond rinoteurwa pamusoro pamafudzi ake. Iye zvake musikana nguva yedu. Hapana munhu asina chaizvo kupendwa chido ouduku, avo vakaramba basa sezvo Khabarov, "Portrait of Mila." Rondedzero-tsananguro basa rake kunoita kuti tinzwisise zvinhu zvakawanda. In zvinonyatsorehwa nziyo mufananidzo inoti kuti munyori anenge kunooneka pachake achiri muduku. Zvichida ndizvo zvaaida uye hope, kana kusuruvara pamusoro yakapfuura pauduku - kupfuura kumbotamba nguva dzaunogona chinyararire kuverenga bhuku chinokunakidza uye akarembera neshamwari panze. Iyi ndiyo nguva ino pachake rusununguko, ndege pfungwa uye muchimuka. Kana kunyange zvake cheya yebhuruu rinopenya makumbo, vamire pakona mukamuri inova nyika yako here, rwamunofamba, kuti ave oga naye. B. Description of mufananidzo Khabarova "Portrait of mi" anotakura rinokosha zvaanoreva. Creative vanhu vane zvavo chiono anokunyengedzera zvenyika. Saka, muna firimu V. I. Habarova mucherechedzo pfungwa dzinokosha kuti ticharamba pakupedzisira kuona kukosha uye kumira. nguva ino, pfungwa chevana, zvisina kusvibiswa vatorwa mupfungwa, uye kuratidza kwako chete maonero enyika.
Gzhel kupenda: mapatani kuti beginners. Gzhel akapendwa tableware mapatani
Watteau kupenda. Antoine-Jean anobvarura kubva munguva itsva iri mufananidzo: iri rococo
How kuzochera munhu Snow White: A mutungamiri vabereki
Ivanov, "Kuonekwa Kristu kuvanhu." Kuongororwa mufananidzo "Kuonekwa Kristu kuvanhu"
Moscow nezvivanze ... Paintings nguva dzose!
Yakakurumbira mifananidzo kubudikidza Van Dyck: zita, description,
Yokutindivadza conduction. Yokutindivadza mu dentistry.
Hotel Lae Lay Inn Karon 3 * Thailand pamusoro. Phuket: Wongororo, rondedzero uye wongororo
Vanhu Eurasia wavo kusiyana uye mitauro
Basa chokuenda zvivako.
Evanhu vanamajasi - kudzidzira yakanyatsobatana
Chicken pakuyera muchoto
Sublease - chii ichi? Sei kupinda sublease vasiri dzinogarwa musha
Retired pashure pemakore 80: bonuses uye kushivirira. RF mudyandigere Fund
Maria Nefedova: Biography uye mabasa
Silent kugadzwa: zvazvinoreva uye mashandisiro ezvidzidzo nayo?
Kauai Raymond: Biography, upenyu hwomunhu
Kubatsira paIndaneti okushambadza pamusoro dzimwe mhando pakushambadzira